Ogaden News Agency (ONA) – Xisbiga Xoriyadda dadka madow ee Koonfur Afrika ANC oo u dabaaldagay maanta 100guuradiisii
Xisbiga Xoriyadda dadka madow ee Koonfur Afrika ANC oo u dabaaldagay maanta 100guuradiisii
Posted by ONA Admin	/ January 8, 2012
In ka badan 100,000 ayaa la filayaa dhamaadka todobaadkan inay isugu yimaadaan magaalada Bloemfontein kaniisad ku taala oo ah meeshii lagu asaasay xisbiga ANC oo loo dabaaladagayo 100 guuradii asaaskii xisbiga. Xisbigan ayaa loo asaasay inuu la dagaalamo xukunkii 1994kii la badalay ee ku dhisnaa midab-takoorka inta yaree cadaanka ah ay ku dulaysanayeen aqlibiyadii madowga ahayd ee dalkaa loogu yimid.
Waxaan dabaaldagga sanadkan ka soo qaybgalin halyaygii shacabka Koonfur Afrika mudane Nelson Mandela oo 93 jir ah, caafimaad darteedna looga joojiyay inuu tago munaasabadaha waaweyn.
Calanka ANC ee dahabiga, cagaarka iyo madowga ka kooban ayaa meel walba ka babanaya, iyadoo dad badan ay wadooyinka ciyaarihii hidaha ay u lahaayeen ay ku cayaarayaan. Wadaadka qaatay biladda nabadda ee Noble-ka Archbishop Desmond Tutu ayaa salaadooda ugu qabtay kaniisada Mangaung, ee magaalada Bloemfontein oo ahayd meeshii 1912kii ay isugu yimaadeen odayaashii bulshada iyo madaxdoodii oy ku dhiseen ururkii gobanimadoonka ahaa ee ugu horeeyay Afrika.
Dabaaldagga oo bilowday maalintii Jimcaha ayuu dhacay xoogisa maanta oo Axad ah 8da bisha Janaayo oo ahayd malintii la asaasay xisbiga 8dii Jan. 1912.
Dad badan ayaa ka biya diidsan kharashka faraha badan ee lagu bixiyay dabaaldagga iyadoo waliba dhaliilo farabadan hadda loo soo jeediyo xisbiga ANC ee talada dalka qabtay, iyadoo lagu eedeeyo musuq-maasuq badan iyo lacaga farabadan oo la lunsado.
Halkan ka daawo damaashaadkii taageerayaasha ANC ;